Toamasina : nihintsana ny tanan’ny raim-pianakaviana nokapain’ny jiolahy ny antsy | NewsMada
Toamasina : nihintsana ny tanan’ny raim-pianakaviana nokapain’ny jiolahy ny antsy
Io indray! Vao telo andro izay ny nahitana fatim-behivavy nokapakapaina valo tao Toamasina. Afakomaly indray, raim-pianakaviana avy niasa hamonjy fodiana no nokapain’ny jiolahy tamin’ny antsibe teo ambony môtô. Nihintsana latsaka tamin’ny arabe mihitsy ny tanany…
Mbola afaka nitsimpona ny tanany ary nampiditra izany tao anaty môtô nentiny ilay raim-pianakaviana nokapain’ny jiolahy ny antsibe teny ambony môtô, afakomaly hariva tao Toamasina. Araka ny fanazavana voaray avy any an-toerana, avy niasa hamonjy fodiana ao amin’ny fokontany Andranomadio izy no tratran’ny jiolahy tampoka. Voakapan’ny antsibe ny tanany mitondra môtô ka niala teo amin’ny 20 sm eo ambonin’ny felan-tanana.
Nikiakiakana avy hatrany kosa izy taorian’izay ka ny fokonolona teo amin’ny manodidina ny toerana nitrangan’ny loza no nitondra azy teny amin’ny Hopitalibe Toamasina. Lasa nitsoaka kosa ireo jiolahy nahavanon-doza rehefa avy nandratra ity raim-pianakaviana ity. Voalaza fa tsy naka na inona na inona ry zalahy fa karazana ankasomparana sy sotasota fotsiny ny natao taminy.
Mampanontany tena ny rehetra ny zava-misy ao an-drenivohitry ny faritra Atsinanana noho ny zava-nitranga tato ho ato izay. Mihazakazaka mankany amin’ny tsy fandriampahalemana sy fampihorohoroana ny azo isokajiana ny zava-mitranga ao Toamasina. Ny alarobia teo tranombarotra iray ao Bazarikely notafihin’ny jiolahy ka saika niharan’ny fitsaram-bahoaka.